ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) – အိမ်တွင်း သတိပဋ္ဌာန် “ပစ္စုပ္ပန်” (မိုးမခ) မေ ၂၆၊ ၂၀၁၈အရှင်ဘုရား.. မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က သာဝတ္ထိပြည်သားတွေဟာ အိမ်ထောင်သားမွေး လူ့ကိစ္စလူ့အရေးဆောင်ရွက်ရင်းကပဲ *အလုပ်လဲမပျက်၊ မဂ်ဖိုလ်လဲရ” ဆိုတာတွေ ကြားသိရပါတယ်ဘုရား၊ ခုခေတ် တပည့်တော်တို့ရော *အလုပ်မပျက် မဂ်ဖိုလ်ရ” နေထိုင်နည်းလေးများ မရှိဘူးလား၊ ရှိရင်ပြောပြပေးပါဘုရား.. တဲ့။ ဒကာကြီးက အတော်မေးတတ်ထာပဲ၊ ဒကာမကြီးပါ သံသာလေကမ်းတိုင်နည်းလေးပါ ရှိ, မရှိ မေးဖို့ကောင်းတာ။ အဟင်း.. မေးချင်တာဘုရာ့၊ မတော်လှဘူးလားလို့ .. အဟဲ ..နှစ်ယောက်တွဲ သံသာလေကမ်းတိုင်အထိ သွားနည်းတော့ မတွေ့မိဘူးဗျ၊ ကမ်းနားအထိ သွားသူများအဖြစ်နဲ့တော့ ရှင်ပိပ္ပလိ (ရှင်မဟာကဿပ) နဲ့ ဘဒ္ဒါထေရီတို့အတွဲ ထင်ရှားရှိပါတယ်။ ကဲ – ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ *အိမ်ထောင်မကွဲ၊...
ကျော်ဟုန်း – ဘီလူးစည်းကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း (မိုးမခ) မေ ၂၆၊ ၂၀၁၈ ရေဆန်ပိတ်ပြီး ငါးရှာတယ် ဆန်တက်တဲ့ငါးတွေ သေဖို့ သာပြင်။ ငါတို့ ဟာ ရေဆန်ငါးတွေဖြစ်ခဲ့။ ငါးဆိုတာ ရေလွှာလှိုင်းထုကို ခေါင်းနဲ့ ဆောင့်ရဲတယ်။ မြားချိတ်က အစာကို ပါးနပ်စွာ ဟပ်စားဖူးသလို အစာမပါတဲ့ ပိုက်ကျော့ကွင်းကို အလီလီ ရှောင်ခဲ့ဖူးတယ်။ လိုရာစည်းကို ဖောက်ထွက်ချိန်မှာ ရခဲ့ဖူးတဲ့ ဒဏ်ရာတွေက တသက်စာကျေနပ်လောက်တဲ့ ငါတို့ ရဲ့ ဆုလာဘ်။ ။ ကျော်ဟုန်း ၂၀၁၈၀၅၂၃ (ပုလဲရတုမြောက် ရှစ်လေးလုံး လူထုအရေးတော်ပုံသို့ဂုဏ်ပြုမှု)...
အောင်ငြိမ်းချမ်း (Myanmar Now) ● မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကို အထွက် တိုးစေမည့် စပါးမျိုးကောင်းမျိုးသန့် (မိုးမခ) မေ ၂၆၊ ၂၀၁၈ ဘိုကလေး — ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဘိုကလေးမြို့မှ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့သို့သွားရာ လမ်းဘေး ဝဲယာတလျှောက် စပါး ခင်းများကို မျက်စိတဆုံး တွေ့မြင်နေရသည်။ ဘိုကလေး၊ ဂျပ်ချောင်းကျေးရွာသား ဦးဝင်းဌေးက ရိတ်သိမ်းချိန် နီးကပ်နေပြီဖြစ် သည့် သူ၏ စပါးခင်းကိုကြည့်ရင်း ပြုံးရွှင်နေသည်။ အပြောင်းအလဲတခု ပြုလုပ်ထားသော သူ၏လယ်ကွင်းက စပါးအထွက်နှုန်း တိုးလာသဖြင့် ထိုသို့ ပျော်ရွှင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ “စပါးအရည်အသွေးက အပြတ်အသတ်သာတယ်။ ရောင်းတဲ့အခါမှာလည်း မျက်နှာပန်းလှပြီး...
KT# အသည်းကွဲစက်ရုပ် တည်ဘွားဦး (မိုးမခ) မေ ၂၆၊ ၂၀၁၈ အသက်မရှိပါဘူးဆိုမှ သွေးတိုးတာကို ခဏ ခဏ စမ်းတယ် ပန်းပွင့်ကလေးတွေ ကြွေတာကြည့်ရင်း ငိုလို့လည်းမရ ရယ်လုိ့လည်း မရ ညဟာ ပိန်းပိန်းမှောင် ထူထူထပ်ထပ် အေးတာလည်းမသိဘူး ပူတာလည်း မသိဘူး ခင်ဗျားတို့လူသားလောကကြီးဆိုတာလည်း နားကို ဗုံးဆံ ကပ်ထားတဲ့ အရသာမျိုးကို ဆိုလိုတာပဲ...
ဒါရိုက်တာပန်းချီဆရာ ၀င်းဖေနဲ့ ခေတ်ပေါ်ပန်းချီဆရာ ၄ဦးရဲ့ တဒင်္ဂ အမည်ရတဲ့ပန်းချီပြပွဲ K (မိုးမခ) နေ ၂၆၊ ၂၀၁၈ ဒါရိုက်တာပန်းချီဆရာ ၀င်းဖေနဲ့ ခေတ်ပေါ်ပန်းချီဆရာ ၄ဦးရဲ့ Moment Of Expressions တဒင်္ဂအမည်ရတဲ့ ပန်းချီပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့အလုံလမ်း People’s Park ရှိ Yangon Gallery မှာ မေလ ၂၆...
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ တစစ် စစ်နဲ့ (မိုးမခ) မေ ၂၅၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ရာဇာသာစည် Related posts ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ ပျော်လို့ဝရင် မော့ကြည့်ပါ … (0) ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ တရားလေးတော့ ထည့်ပါဦး (0) ကာတွန်း ရာဇာ သာစည် – စားမှာပဲ...
အောင်ငြိမ်းချမ်း (Myanmar Now) ● လယ်သမားတို့ညီညွတ်လျှင် စပါးဈေးကွက်တိုးချဲ့နိုင်မည် (အင်တာဗျူး) (မိုးမခ) မေ ၂၅၊ ၂၀၁၈ မြန်မာ့ဆန် ဈေးကွက်မျက်နှာပန်းလှစေရေးအတွက် သင့်လျော်သည့်မျိုးစပါးသုံးကြရန် လိုသည်ဟု မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှ လယ် သမား တဦးက တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ ဘိုကလေး — ဆန်ဈေးကွက် တိုးချဲ့ထိုးဖောက်နိုင်ရန်အတွက် မျိုးကောင်းမျိုးသန့် စိုက်ပျိုးခြင်း၊ လယ်သမားအချင်းချင်း စုပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ လိုအပ်သည်ဟု...
မိုက်ခဲစိန် – သမ္မတထရန့်လက်အောက်မှာ အမေရိကန်ခင်ဗျာ အရူးကို လင်လုပ်ရသလို (မိုးမခ) မေ ၂၅၊ ၂၀၁၈ ဒီစာကို အမေရိကန်မှာ ရေးတော့ ၆၆(ဃ)နဲ့ မငြိဘူးပေါ့။ သူတို့မှာ ၆၆(ဃ) မရှိသေးတာကိုး။ ပြောလို့မရဘူး ဒေါ်နယ်ထရန့်က အမေရိကန်စာနယ်ဇင်းများဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ရေး ဥပဒေဆိုပြီး ထုတ်ချင် ထုတ်နေဦးမှာ။ သူ မထုတ်ခင် အမြန်ရေးရပါတယ်။ မြန်မာစကားမှာ...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Ignorant (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ မေ ၂၅၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
Poetry Wave စာစဉ်အမှတ် ၂ လာပြီ (မိုးမခ) မေ ၂၄၊ ၂၀၁၈ ကဗျာဆရာတွေဖြစ်တဲ့ကေဇော်မိုးနဲ့ ရိုးခက်တို့ရဲ့ Poetry Wave Group ကစီစဉ်တဲ့ ၂ လ တကြိမ်ထုတ် Poetry Wave ဆိုတဲ့ ကဗျာရေးရာသီးသန့် စာစောင်အမှတ် ၂ ကို မေလ ၃၁ ရက်နေ့မှ ဓူဝံစာအုပ်တိုက်ကနေ...
အောင်ငြိမ်းချမ်း၊ ဝင်းနန္ဒာ/Myanmar Now ● ဘုန်းကြီးကျောင်း ငရဲခန်းမှာ လပေါင်းများစွာ (မိုးမခ) မေ ၂၄၊ ၂၀၁၈ ပုသိမ် — ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငွေဆောင်ကမ်းခြေသို့သွားရာလမ်းဘေးရှိ အိမ်လေးတစ်လုံးတွင် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် အမျိုးသမီးတချို့ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ထိုင်နေကြသည်။ သားရေကွင်းကို လက်ချောင်းများတွင် ရစ်ပတ် ဆော့ကစားနေသော ဆယ်နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးလည်း သူတို့နှင့်အတူ ရှိနေသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားသည့်...
မေငြိမ်း ● မိဘနဲ့ သားသမီးဆိုတာ (မိုးမခ) မေ ၂၄၊ ၂၀၁၈ ကျမရဲ့ သားသမီးတွေ ထူးချွန်ကြတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Post တင်မယ်လို့ ကြံတိုင်း ကျမသတိရတာက မြန်မာပြည်က လူတချို့ ပြောဖူးတာကို သတိရမိလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ နိုင်ငံကြီးမှာနေပြီး အခွင့်အရေးရနေတဲ့သူတွေ အောင်မြင်တာ မဆန်း ပါဘူး။ ဒီမှာက အရာရာ ချို့တဲ့နေကြတာ…....
Page 1 of 89712345...897»
>Shwe Pyi Soe - Shwe Nya Wah Sayadaw and Regime's Monks Authority
ကျော်ဟုန်း – ဘီလူးစည်းကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း https://t.co/1pKvxDMJFA https://t.co/Lv6kU1Hn4F about 10 hours ago ReplyRetweetFavorite
တည်ဘွားဦး – အသည်းကွဲစက်ရုပ် https://t.co/QjiPGoiuHY https://t.co/IZiev0V593 about 11 hours ago ReplyRetweetFavorite
ဒါရိုက်တာပန်းချီဆရာ ၀င်းဖေနဲ့ ခေတ်ပေါ်ပန်းချီဆရာ ၄ဦးရဲ့ တဒင်္ဂ အမည်ရတဲ့ပန်းချီပြပွဲ https://t.co/xXmxqXwYqR https://t.co/6MBegX80FB about 14 hours ago ReplyRetweetFavorite